Xildhibaano sheegay inay Xukuumadda Soomaaliya la xisaab tamayaan | Galmudug TV
Home WARARKA Xildhibaano sheegay inay Xukuumadda Soomaaliya la xisaab tamayaan
Qaar kamid ah Xildhibaanada golaha shacabka ee kasoo jeeda deeganada Maamulka hirshabeele oo Maanta Warbaahinta kula hadlay Magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka hadleen khilaafka Siyaasadeed ee kajira gobalka hiiraan iyo dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka kalabeyr ee uu kugeeriyooday taliyihii ciidanka booliska ee Gobolka Hiiraan.
Xildhibaan Daahir Amiin jeesow oo kamid ahaa Xildhibaanadii la hadlay Warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in ay magacabayaan guddi u kuurgalaya dagaalkii shalay kadhacay degaanka kalabeyr ee duuleedka magaaladaasi Baladweyne .
Waxa uu sheegay Xildhibaanka in Ciidamada kala duwan ee dowladda ee kahowlgala gobalkaasi hiiraan ay ka qayb qaateen dagaalkaasi,isla markaana arintaasi baari taano ay ku sameyn doonaan hadii ay cadaatana ay kula xisaabtami doonaan Xukuumadda Soomaaliya .
Wasiirkii hore ee Wasaaradda Amiga Xildhibaan Cabdirisaaq Cumar Maxamed ayaa dhankiisa dhinacyada dagaalamay waxa uu ugu baaqay in ay dagaalka joojiyaan ayna adkeeyaan midnimada maamulka Hirshabeele,waxa hadalkiisa intaasi ku daray in waxa laysku heysto uu yahay khilaaf siyaasadeed loona baahan yahay in la raadiyo xal siyaasadeed .
Waxgaradka, Odayaasha dhaqanka iyo Culuma udiinka gobalka Hiiraan ayuu dhankooda ugu baaqay in ay ka qayb qaataan nabadeynta dadkii uu dagaalka dhexmaray ee ku wada sugan gudaha Gobolka Hiiraan.
Previous articleCiidamo cusub oo loo diyaariyay dagaalka Al-Shabaab
Next articleRa’iisul Wasaare Kheyre oo tacsi ugu tegey qoyska iyo ehelka Cabdiraxmaan Yariisow
Dhageyso:-Madaxweyne Farmaajo”Waa In Shacabkeena Aan Ka Difaacnaa Al-Shabaab”.
Guddiga Madaxa Bannaan ee dib u eegista Dastuurka oo daahfuray wajiga labaad ee dib...
Ciidamada Booliska oo Suuqa Bakaaraha ku qabtay rag burcad ah oo mid la dhaawacay
DHAGAYSO;Kenya oo gacanta ku dhigtay Dagaalyahano Katirsan Alshabaab.